Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles ao amin'ny Spotlight amin'ny hetsika Virtual Virtual Italiana
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • fivoriana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny nosy Seychelles dia nasongadina nandritra ny andro virtoaly nokarakarain'ny Biraon'ny fizahan-tany Seychelles any Italia tamin'ny 26 septambra 2021.
Ireo mpitsidika italianina mitazona Green Pass manan-kery izao dia afaka mandeha any Seychelles ankehitriny miaraka amin'ny fitakiana quarantine sy fitokanana rehefa tafaverina any Italia.
Ity fivoarana vaovao ity dia nampiroborobo ny fizahan-tany Seychelles rehefa nandray anjara tamin'ny hetsika virtoaly.
Anisan'ny nampientanentana ny hetsika ny loka toy ny toerana iray amin'ny dia familianazation mankany amin'ny paradisa madio.
Manome sehatra hampiroboroboana ny toerana itodiana eo amin'ny tsena italiana sy hihaona amin'ny varotra, ny hetsika dia nifanojo tamin'ny fanambarana nataon'ny minisiteran'ny fahasalamana italianina izay nandrasana fatratra lalambe fizahan-tany mankany Seychelles izay hamela ireo mpitsangatsangana avy any amin'ny faritra hitsidika ny nosikely mahatalanjona ihany amin'ny farany.
Araka ny fivoarana vaovao, ireo mpitsidika italianina mitazona Green Pass manan-kery izao dia afaka mandeha any Seychelles ankehitriny miaraka amina quarantine sy fitokana-monina rehefa miverina any Italia, raha toa ka nanolotra fanadinana PCR ratsy vita 48 ora alohan'ny fiaingana ary nanao swab farany rehefa tonga tany seranam-piaramanidina any Italia.
Ny hetsika dia namela ny ekipa hanavao ny varotra amin'ireto fitsipika vaovao ireto ary hanamafisana ny fahatokisan'ireo mpiasan'ny dia izay efa niandry fatratra ny hanomboka hamidy indray ny nosy.
Mpanentana tamin'ity hetsika ity dia mpiara-miasa marobe, dia ny Berjaya Hotels Seychelles, Creole Travel Services, Ethiopian Airlines, Four Seasons Resorts Seychelles, Go World Tour Operator, North Island Luxury Resort, Paradise Sun Tsogo Sun Hotels, Qatar Airways, Raffles Seychelles, Story Hotel sy Resorts.
Ny Seychelles Virtual Day dia notontosaina tamina sehatra teknolojia avo lenta iray izay misy mpandray anjara tsirairay manana avatar manokana afaka mifamezivezy eo amin'ny toerany sy mifampiresaka amin'ireo mpampiranty sy izy samy izy. Ho fanampin'ny tambajotra dia afaka nizara fampisehoana, horonan-tsary ary nampakatra fitaovana fampiroboroboana ireo mpampiranty.
Ny loka mahafinaritra, ao anatin'izany ny toerana anaovana familiarization mankany amin'ny paradisa madio dia natolotra, tamin'ny alalàn'ny Quiz izay tsy maintsy namitan'ny mpandray anjara sarintany niaraka tamin'ny karazan-javamaniry sy zavamaniry Seychelles.
Danielle Di Gianvito, Solontenan'ny Marketing Seychelles fizahan-tany any Italia, dia naneho hevitra hoe: handray mpizahatany iraisam-pirenena, izay, farany, ankehitriny dia misy Italiana izay tia io toerana mahafinaritra io. Tena fahombiazana lehibe ity hetsika ity ary fanentanana vaovao ho an'ny fanombohana vaovao. ” Ny hetsika dia narahina hetsika maromaro teo amin'ny tsena Italiana, na virtoaly izany na ara-batana.
Ireo mpitsidika an'i Seychelles dia tsy maintsy mameno takelaka alalana amin'ny dia amin'ny seychelles.govtas.com ary asehoy ny porofon'ny fitsapana PCR ratsy 72 ora alohan'ny handehanana mankany amin'ny toerana haleha.